Mepụta Mail Mail - Emelitere ya na Windows Live ID | Akụkọ akụrụngwa
Mepụta Hotmail email
Otu esi emepụta akaụntụ na Hotmail?
Mepụta email na Hotmail odi nfe. Mana kemgbe ịhapụ Windows Live ID usoro agbanweela ma ọtụtụ mmadụ amaghị etu esi eme ya, yabụ ka anyị mee kọwaa nzọụkwụ site na otu esi mepụta email na hotmail.
1 Otu esi emepụta akaụntụ na hotmail?
2 Ubi iji weghachite akaụntụ gị
3 Lelee na ị bụghị robot
4 Esi mepụta akaụntụ Outlook
Ihe mbu anyi gha eme bu mebe Windows Live ID. Iji mee nke a, anyị ga-abanye ibe a.
N'ime ya ha ga-ajụ gị maka data gbasara onwe gị:
N'isiokwu na-esote ọ jụrụ gị kedu otu ị chọrọ ịmalite oge gị. Nke ahụ ga-abụ email gị hotmail na ọ bụ otu ihe ahụ ị ga - eji dị ka nbanye maka akaụntụ Windows Live gị, yabụ ị ga - pịa bọtịnụ ahụ «Ma ọ bụ nweta adreesị ozi-e ọhụrụ».
Ozugbo ịpịrị ebe ahụ, egosipụtara menu na-ahapụ gị ịhọrọ aha onye ọrụ gị (ọ bụrụhaala na ọ dị adị) na ngalaba ebe ịchọrọ ịmepụta ya. N'oge a ị nwere ike ịhọrọ ịmepụta akaụntụ na @ outlook.es, @ outlook.com, @ hotmail.es, @ hotmail.com or @ live.com
Họrọ ụdị nke ngalaba kachasị amasị gị. Na mbụ enwere ike inwe ya na hotmail ma ugbu a, i nwere ike inwe ya na Outlook ma ọ bụ Live na ọ na-arụ ọrụ otu ihe ahụ.
Ubi iji weghachite akaụntụ gị
Ozugbo emere nke a, ọ ga - anọgide naanị iji mezue usoro ndị ga - enyere gị aka weghachite akaụntụ gị ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla (furu efu paswọọdụ, akaụntụ hacking, wdg). Ọ dị mfe ebe ọ bụ naanị na ị ga-egosi:
otu Adreesị ozi ịntanetị ọzọ. N'ebe a, ị nwere ike iji akaụntụ gị ọzọ na gmail, yahoo.es ma ọ bụ dịka ọmụmaatụ akaụntụ email nke mahadum ma ọ bụ ọrụ
Nhọrọ ị nwekwara ike itinye ajụjụ nchekwa. Ọ bụ ezie na o doro anya na ọ bụ obere nchekwa dịkarịa ala ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị nwere ike ịza azịza ahụ.
Iji mechaa data ahụ, naanị ị ga-ejupụta obodo gị na koodu nzi gị.
Captcha iji nyochaa na ị bụ mmadụ
Lelee na ị bụghị robot
Microsoft - dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ - kwesịrị inyochaa na onye na-edebanye aha maka Windows Live dị adị na ọ bụghị a robot na-edebanye aha na-akpaghị aka. Nke a bụ ihe kpatara na ọ na - ejikarị usoro agwa agwa agbagoro agbagọ nke na - arịọ gị ka ịmegharịa. N'ụzọ nke a, naanị mmadụ nwere ike ịmata ndị odide ahụ ma degharịa ha n'ụzọ ziri ezi ọzọ.
Ozugbo ị bịara ebe a, ị ga-anabata ahịrịokwu iwu niile wee pịa bọtịnụ nnabata ma ị nwere nke gị akaụntụ ọhụrụ hotmail.
Kedu ihe dị mfe?
Esi mepụta akaụntụ Outlook
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ mepụta akaụntụ Outlook ugbu a hotmail adịkwaghị, na njikọ ahụ anyị tinyeworo, ị ga-ahụ ihe nduzi ga-eme ya site na nkwụsị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Mepụta Hotmail email
Nyochaa nke iPhone 6s Plus ọhụrụ